Xarumaha dhalinyarada waxay qeylodhaan ka muujinayaan gardarada maxaa yeelay 'daryeelka' runtii waa waxyeelo? : Martin Vrijland
Xarumaha dhalinyarada waxay qeylodhaan ka muujinayaan gardarada maxaa yeelay 'daryeelka' runtii waa waxyeelo?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 4 November 2019	• 11 Comments
Wasiir Sander Dekker (waad ogtahay garsoorayaashaas, oo qof walba u arki kara inuu yahay sodogga ku habboon, laakiin yaa laga yaabaa inuu yahay yeeyga oo ku jira dharka idaha) ayaa sheegaya in laga naxay sababtuna tahay xoojinta shilalka ka dhaca daryeelka dhalinyarada. Hagaag, Sander, malaha taasi waa sababta oo ah George Orwell horeyba wax buu ugu sharxay buugiisa 1984 warfaafin waa. Buuggaas waxaa lagu sharraxay in ereyada sida 'daryeel' ay dhab ahaantii la macno noqon karaan xumayn iyo inbadan oo naxdintaas leh. Horey ayaan u arkaa taas oo leh duubitaankeyga qarsoon ee kaamirada qarsoon ee 'daryeelka dhalinyarada' ee 2013 (eeg fiidiyowga hoose). Agaasimihii hay'addaas ee Heerhugowaard waxaa shaqada looga eryey duubitaannadan awgood xeerarka wax yar baa la isku habeeyay, laakiin taasi dabcan waxay ugu horreyntii ugu talagashay inay indho indheeyayaasha albaabka uga sii jeediso xitaa si waadax ah.
Fiidiyowgaan wuxuu bixinayaa xoogaa xoogaa ah oo ku saabsan argagaxa ku dhacay hay'adahaas. Waxaan duubitaankan sameeyay markii gabadh saaxiibkay ahi ay ku tagtay xarun noocan ah. Maaddaama ay qandho qabeen, si gaar ah ayaa naloogu soo dhoweeyay oo waxaan ku duubi karaa kamarad qarsoon. Taleefoon gacmeed lagu tahriibay, oo aan ku qariyey joodariga sariirteeda, ayay ku guuleysatay inay sameyso duubis cod ah oo ku saabsan xadgudubka deriskeeda (shaqaalaha hay'adda). Waxaad maqli doontaa in dhamaadka fiidiyowga. Qaybta hore ee fiidiyowga waxay ka warbixineysaa sida ay ugu qasbanaatay inay soo tabiso howl kasta oo ay ka qabato albaabka dibaddiisa. Naxdin saafi ah dhallinta aan haysanin wax khatar ah, laakiin si fudud u haysta waqti adag oo qaan-gaar ah ama xaalad guri. Oo dabcan tani waxay ahayd uun sawir qaadid iyo caarada xiisaha. Sheekooyinka ay ii sheegeen dhowr qof oo hore deggane u ahaa (kaliya) machadkan in ay dunidan ka baxsan yihiin! Naxdin saafi ah oo cidina arkin! Jardiinooyin habeysan iyo dhismooyin wanaagsan, laakiin dhexdeeda dhexdeeda waa cadaabta dhulka.
Waagii hore ayaa laguu oggol yahay inaad noqoto barbaar caadi ah; maalmahan waxaa lagugu xiray qol gooni gooni ah. Haddii waalidkaa kugu xiraan guriga, waxay heli doonaan cinwaan-xumo; haddii shaqaalaha daryeelka dhalinyarada ay ku siiyaan "kicinta xannuunka" (akhri: midba midka kale ku dhufasho) ama ku tuuraya qolka go'doominta, taasi waa waxbarasho iyo "lama huraan". Taasi si lama filaan ah ma fiicantahay? Xagee ku danbeynay !?
Damiirka shaqaalahan daryeelka dhallinta waxay umuuqataa in laga goynayo bixinta deynta ama kirada iyo wixii ugu dambeeyay Nike ee ay dhaleen. Waxay umuuqataa xoog in mushaar joogto ah laakiin joogto ah ay aamusiso damiirka. Damiirka shaqaalaha iskucelceliska daryeelka dhalinyarada ayaa laga yaabaa inuu buuxiyo fikradda ah 'befehl ist befehl'. Hadda waxaa laga yaabaa inaad ogaato niyadda-samaynta oo runtii aad ku qanacdo inay sidoo kale jiraan dad badan oo qalbi dhab ah u leh arrinta. Waan ka xumahay, laakiin malaha maahan wax aan jirin in rabshado badan ay u geestaan ​​shaqaalaha daryeelka dhalinyarada. Waxaan helay badan (bogsasho: Waxaan ula jeedaa kuwo aad u badan) cabashooyinka ku saabsan daryeelka dhalinyarada. Aad u badan in la xuso! Marka taa la ixtiraamayo, waxaan ku khasbanaaday in aan tuuro xadka si aan u bixiyo dhammaan cabashooyinkaas shaqsiyeed. Waa mid aad u badan oo shucuur ahaan aad u walaac badan!
Fikradeyda, daryeelka dhalinyarada ma ahan walaac. Waxaan goob joog u nahay xeryo dib-u-waxbarasho oo naxdin leh halkaas oo qof kasta oo bini-aadamku iska indhatiro. Hagaag, maya, marag uma nihin, sababtoo ah maanaan arkin. Waxay ku dhacdaa dhumucda; albaabada xiran iyo jardiinooyinka wanaagsan. Qufulka dhalinyarada qaan gaarka ah ee guryahooda laga yaabo inay sifiican usii fiicnaanin oo ay maamusho waxa loogu yeero "xanuunka kiciya," oo ay kujirto qufulka unugyada go'doominta, ayaa si fudud uga xun Madiina. Markaa wasiir caynkaas ahi oo sita muraayado hagaagsan oo muraayadaha saxda ah iyo suudhku wuxuu oran karaa waa “naxdin”, laakiin aniga taas wax aan ka aheyn waa yeeyga oo ku jira dharka idaha ee dhahaya 'beh'. Daryeelka dhalinyarada oo dhan waa wareegga xarumaha oo kasbata lacag fara badan "adeegyada" oo lacag ku shubaya dhabarka dambe ee carruurta nugul ee aan waxba galabsan. Waxay noqotay warshado run ah!
Waxaan dhihi lahaa: Adiga Sander Dekker maalin maalmaha ka mid ah waxaad ku qaadataa qol wanaagsan (maxaa yeelay ma jiro meel ka badan oo leh furaha furaha furaha ah oo ay ku yaalliin "machad") oo ka tirsan machadka "daryeelka" ee dhallinyarada. Hayso gacanta wanaagsan ama qoorta isku dheji si aad u daawato si aad ugu tuurto qolka go'doominta si aad u qaboojiso (akhri: daal iyo gabi ahaanba jahwareer ku jiifa dhulka). Kadib waxaan jeclaan lahayn inaan mar labaad ku aragno shaashaddaada qurxoon oo leh xarig. Eeg haddii aad weli sheekaysane leedahay.
Waxaad weydiin kartaa: Ma wax lala yaabo in shaqaaqo badan oo lagula kaco shaqaalaha "daryeelka" dhalinyarada soo kaco mise waa wax la yaab leh in shaqaalahan ay u muuqdaan inay damiirkoodu sii kordhayo? Maxaa ku dhacay Nederland, waddanka ay qof waliba u muuqato inuu midba midka kale gacmaha is qabsanayo si loo saxo anshax xumada iyo kor u qaadida heerka aan caadiga ahayn? Ayaa yaa awooda u leh inuu soo ceshano damiirka isla markaana soo afjaro argagaxaas oo kale? Yaa yaa? (Sidoo kale fiidiyowga ka daawo faallooyinka)
Soodhawrka xiriiriya: nu.nl
Dacwad: Imtixaan maskaxeed oo khasab ah Mark Rutte iyo Sander Dekker oo jooga kiiska Anne Faber
Dila carruurtaada, waxaadna heli kartaa sanado kaliya 2 sida ku xusan qoraalka Yasmine M. maanta
Tirada diiwaanka dadka khaldan ayaa sababay dhibaatada
Dad badan iyo dad badan ayaa u shaqeynaya gobolka, sidaas darteed dhaleeceynta dawladu way baaba'aysaa
Tags: gaarsiin, Dekker, featured, Heerhugowaard, xarumaha dhalinyarada, daryeelka dhalinyarada, Wasiir, gambaleelka degdega ah, Sander, xarumaha caafimaadka
Wilfred Bakker ayaa qoray:
4 November 2019 ee 05: 26
4 November 2019 ee 06: 35
Share garee share share !!
FADLAN FADLAN: Facebook ayaa ku xayiraya fariintan jadwalka dadka sababtoo ah waxay u arkaan "mid aan muhiimad aheyn" (akhri faafreebka gobolka), sidoo kale ku wada wadaag boostada shaqsiga ah, WhatsApp ama waxkastoo!
Waxa ugu xun waa in dadka intooda badani aan dan ka lahayn inay jecel yihiin inay wadaagaan maqaallada ... iyagoo ka baqaya in dadka kale ay ku qosli doonaan halkii ay ka garan lahaayeen in ceebta laftooda ay ceeb ku tahay.
4 November 2019 ee 06: 54
Waxaan mar labaad iyo mar kale aragnaa sida xukunnada sida la sheegay loola dagaallamayo caddaalad darrada laftooda ay u galaan isla caddaalad darrada ugu weyn. Allies waa ay eryi lahaayeen Naasiyiinta, laakiin waxay ku duqeyn doonaan Dresden jawiga Winston Churchill markii dagaalku dhamaaday. Naasiyiintu waxay dadka laayaan wax aan waxba ahayn, laakiin “badbaadiyayaashu” isla sidii bay yeeleen. Marka laga soo tago su’aasha ah cidda dhab ahaan maalgelisay Adolf Hitler (miyaanay ahayn lacagtii Zionist ka timid Maraykanka?): Nasiisnimadu waligii ma joogsatay? Mise maqalkii Adolf Hitler ee goobta ka dhacay runtii bilowgii dib u dhiska fascism-ka jaakad dimoqraadi ah oo cusub oo macaan leh?
Nasiib wanaag nasiib wanaag waxaan wali haysannaa sawirada .. taasi waa sidey u dhacday dagaalkii kadib (arag darbiyada befehl ist befehl Shots of all "badbaadiyayaal").
Xeryaha dib-u-soo-nooleynta Soofiyeedka ayaan hadda loo aqoonin gulag maanta oo xeryaha lagu soo uruurinayo Nazi ma laha muuqaalkaas xun. Maalmahan waxaa loo yaqaannaa rugta caafimaadka GGZ ama xarunta daryeelka dhalinyarada. Waxaan noqonay waxyar oo ka sii caqli badan oo wax walba waxaan gelinay jaakad hadal-qurux badan oo Orwellian cusub, si uusan qofna u dhibin niyada damiirka. Albaabka hore waa hagaagsan yahay oo beerta oo hagaagsan albaabka qolkuna wuxuu leeyahay qurxin wanaagsan iyo quful lambar furaha ah.
4 November 2019 ee 06: 59
4 November 2019 ee 07: 07
Tirada dhimashada waxay si rasmi ah u ahayd 25 kun, laakiin taasi waxay ku saleysan tahay fikirka Churchill ee "Taariikhda waxaa qoray amiirka"
Xaqiiqdii, waxaan ka hadlaynaa boqolaal kun ilaa milyan milyan oo geeri kadib qaraxan. Si kastaba ha noqotee, dabcan mar labaad ayaa la sheegaa in ay tahay Neo-Nazis kuwaa oo soo waca nambarka noocaas ah. Guuluhu wuxuu dib u akhriyaa buugaagta taariikhda (dabcanna waxay la soo baxdaa wax aan muuqan).
Waxay ahayd mid isku xigta oo mowjado waaweyn oo roob dabeylo wata oo ay ku xigto dab weyn oo baabi'iyay wax kasta oo nool. Xusuusin: dagaalku mar hore wuu dhammaaday!
4 November 2019 ee 07: 27
Waa maxay sababta aan u dhajiyay kor ku xusan?
Si aan u muujino inaan wali ku nool nahay nidaam qaldan; nidaam xukun dadka ku xidha oo xero xero u sameeya. Xerooyinkaasi kaliya waxay u muuqdaan xoogaa quruxsan, waxay leeyihiin cinwaanka hay'adda daryeelka shaqaalaha waxayna leeyihiin mushahar wanaagsan, Volkswagen nadaafadeed iyo jardiinooyin qayb wanaagsan lagu habeeyay.
Damiirka shaqaalaha waxaa lagu miiray mushaarka iyadoo lala wadaago sheekooyinka ku saabsan shaqada xafladaha iyo xafladaha ama mashiinka qaxwaha.
4 November 2019 ee 07: 58
Grappemaker ayaa dhadhan u leh ka dib Wiersum psyop
iyo ilaa Dresden ka walaacsan ... sifiican tuhmanayaasha caadiga ah kama baxsan kartid
AnOpen ayaa qoray:
4 November 2019 ee 16: 05
Mar kasta oo mushkilad la yiraahdo ay dhacdo waxay kugu kallifaysaa inaad si xoog leh uga jawaabto wicitaanka xallinta, wax ka qabashada ama wax ka qabashada. Intaa ka dib, waxaa sii kordhaya sharciyo badan oo sharci la helayaa Ku dar ilaalin dheeraad ah iyo awoodo shaqaalaha daryeelka dhalinyarada. Kaliya xiro oo samee waxa la yiri haddii ay xaq tahay iyo inkale. Iyada oo loo adeegsado sixir barar iyo akhlaaq xumo ayaa qofku ku ciqaabayaa xukunkooda macaamilka. Waxaa laguu soo dhawaadey oo laguula dhaqmayaa sidii alwaax oo kale maxbuus maxalin Mareykan ah. Xaqiiqdii waxaad tahay shay goobahaas oo kale. Bulshada wanaagsan, sax? Haha haa befehl ist befelh waxaa si fiican ula socda barnaamijka softiweerka ah, wixii qalloocsanna waxaa loo arkaa inay tahay mid aad u sarreysa. Waxa ka reeban waa uun “kutaan” nidaamyadooda. Badanaa iyagu carruur ma leh, laakiin waxay rabaan inay raacaan "kan yar" sida ku xusan buug. Miyuu u eg yahay wax soo saar ahaan? Waa inaad ku haysataa "meel" masaafad cayiman haddii kale badbaadada qoyskaaga ayaan mar dambe la dammaanad qaadi doonin. Sida max maxbuuska dhabta ah. Weligaa ma ogtahay hey?
Hey Martin oo mar labaad ku caajisaan aqoonta. Waad ku mahadsantahay wadaagida aqoontaada, mahadsanid. Mararka qaar waxaan la wadaagaa maqaalladaada. Laakiin dadku waxay moodayaan inaan waalanahay. Ama dadku waxay ka walwalaan maadooyinka qaarkood Ama waxaad la timaadaa waxyaabaha caynkaas ah ee xad-dhaafka ah. Macno malahan sida ay u sarreyso caqligu, ilaa garashada garashada dhererka gaarka ahi ay bilaabanayso inay ciyaartid ama madaxa ciidda hoos ugu dhacdo. Ama ay kugu soo jeestaan. Xitaa waxaan la dagaallamay arrinta markii aan tixraacay qodobbadaas.
Adduunkooda ha ku taaban curyaannimadaada sababtoo ah markaa waad taaban doontaa, way ku siin doonaan. Miyaad dib u bixin kartaa?
Sida dadku u laalaadaan sixirka, waa inaad la xiriirtaa noocyada dadka ku xadgudba dhalinyarada.
4 November 2019 ee 18: 43
Jawaab wacan adiga kaa timid. Hagaag, way adag tahay in laga sugo diyaarado laga qaado dadka caadiga ah maxaa yeelay dhamaantood waa cabsi. Waxay u barakiciyaan arintaas intii suurta gal ah iyaga oo adkeynaya cadaadiska kooxda intii suurta gal ah isla markaana raacaya qodobbada ajandaha loo dejiyey Dadweynahu waxay ka hadlayaan waxa ay go'aamiso dowladda. Nederland, Madurodam, ayaa laga yaabaa inay ka sii liidato tii hore ee GDR. Halkan waxay ku ciyaaraan si xariifnimo leh. Niyad jabinta Nederland waa la qayaacay, ceebi waayey, aamusna ilaa geeri, iwm, haddii aad dhib ku qabtid meelna waxaad ka helaysaa shil dhuumaaleysi ah, dabcan waxaa hagaya raggaas caajiska ah waad ogtahay. Sababtoo ah geesiyaashu kama shaqeynayaan hargabka. Sababta oo ah heerka wiilasha 'xaaladda waa in loo ilaaliyaa si walba. Dib-ugu-noqoshada heerkaas oo ah tirada dadka caadiga ah ayaa la mamnuucay. Qoraalka waa in la raacaa.
4 November 2019 ee 19: 10
Waxaas oo dhami maahan inay noqdaan qarsoodi. Haddii sharcigu ka gudbo qolka in qof walba, qoyska, asxaabta ama deriska lagu tilmaami karo inuu yahay qof laga yaabo inuu jahwareer ku yimaado, ka dib cilmi nafsiga ayaa si fudud kuugu soo qaadaya adiga oo aan faragalin ama dhakhaatiirta cilminafsi weydiinin.
Thanks to Thijs H. PsyOp, Ruinerwold PsyOp iyo kuwa kaloo badan oo laga soo bilaabo sanadkii la soo dhaafay.
Sidan ayaa ah sida aad u nadiifiso kuwa isqarxiya halka kuwo kale ay nolol fiican ku helaan sidii shaqaale GGZ ah (waardiyayaasha cusub).
4 November 2019 ee 07: 50
Haa, waa run in aan ku nool nahay degenaansho aamusnaan, kalgacalnimo khiyaano. Isbedelka nidaamka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah markaa shacabka ayaa ugu dambeyntii ku noolaan kara dalkooda xorta ah haddii aysan sii haysan xilalkooda muhiimka ah ee ah inay nolol aad u wanaagsan ku qabaan, waqti dheer, aad u dheer.
« Daloolka madow ee uu sawiray NASA runti waa plasma plasmid ah
Buugga cusub ee Martin Vrijland 'Xaqiiqada sida aan u aragnay' waxay diyaar u tahay gudbinta! »
Guud ahaan Wadarta: 13.903.479
Martin Vrijland op Gobol booliis ah oo ka xun Nazi Jarmalka ayaa ku soo dhacaya sida yey oo ku jirta dharka idaha mana arki kartid
Sunshine op Gobol booliis ah oo ka xun Nazi Jarmalka ayaa ku soo dhacaya sida yey oo ku jirta dharka idaha mana arki kartid
SalmonInClick op Gobol booliis ah oo ka xun Nazi Jarmalka ayaa ku soo dhacaya sida yey oo ku jirta dharka idaha mana arki kartid
Marga op Gobol booliis ah oo ka xun Nazi Jarmalka ayaa ku soo dhacaya sida yey oo ku jirta dharka idaha mana arki kartid
Ku biir 1.683 macaamiisha kale